Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အနောက်တံခါးကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခြင်း ခံနေရသော်လည်း အိပ်မောကျနေကြသည့် ရခိုင်များ
အနောက်တံခါးကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခြင်း ခံနေရသော်လည်း အိပ်မောကျနေကြသည့် ရခိုင်များ
ဘင်္ဂလီ ကုလားကျွန် အမှန်ဖြစ်ရတော့မည်လား
ရခိုင်များ၏ မထမ အနောက်တံခါးပေါက်ကို ၁၆၆၆ တွင်အချိုးခံခဲ့ရသည်။ အရှေ့တံခါကို ၁၇၈၄ တွင်အချိုး ခံခဲ့ရသည်။ ယခုနှစ်ဇွန်လတွင် နောက်ဆုံး အနောက်တံခါးကို အချိုးခံနေရသည်။ ဤတချီမှာတော့ လူမျိုးလဲ ပျေက်၊ မြေလဲဆုံးရတော့မည့် အခြေအနေကို ရုတ်ခြေရောက်ရှိလာနှိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ရခိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်သူများမှာ အိပ်မောကျမြဲ ကျနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသောအနောက်တံခါး ချိုးဖျက်ခံနေခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ရခိုင်များညံ့၍သာ ဖြစ်သည်။ သို့လင့်ကစား ရခိုင်များအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မဆန်းစစ်၊ မလေ့လာ၊ ပြန်လည်မသုံးသပ်ကြဘဲ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ဘီဘီစီ အပါအ၀င် နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနများ၊ မြန်မာအစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ကို လူပိန်းအမြင်ဖြင့် လွယ်လင့်တကူ လက်ညှိုးထိုး ဆေးဆို၊ တိုက်ခိုက် အပြစ်ပုံချကာ ကိုယ့်တာဝန်ကျေပွန်ပြီဟု ခံယူထားကြသည်။ အလုပ်ကြီးတခုလို သတ်မှတ် လုပ်ကိုင်နေ ကြသည်။ ခံစားချက် ဆန္ဒစွဲများကို ဦးစားပေး ဖြေရှင်းတက်သည့် (feel good habit) အကျင့်ဆိုးများကို စွဲကိုင်ထားကြသည်။ ရလဒ်မှာ မိတ်ဖက်ထက် ရန်ဖက်များလာပြီး၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှစ်က လူတုံးလူအ၊ လူညံ့ လူဖျင်း (ignorance) များ သာဖြစ်ကုန်ကြပါတော့သည်။
အမှန်ဖြစ်သင့်၊ လုပ်သင့်သည်မှာ ရခိုင်များ စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး ဇာတိသွေးဇာတိမာန်အပြည့်ဖြင့် တမျိုးသားလုံး ကောင်းစားရေး၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာတည်တန့်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲဖြင့် ရခိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်း နှိုင်ရေး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအောက်တွင် ရခိုင်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် တခုပေါ်ပေါက်ရေး၊ ရခိုင်လူငယ်များ အိမ်ပြန်လာနှိုင်စေရန် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးအတွက် စီးပွားရေး စီမန်ကိန်းများ ချမှတ်ကာ အနောက်မှလှိမ့်ဝင်လာသည့် ဘင်္ဂလီများကို တားဆီးရန်နှင့် ဘူးသီးတောင် မောင်တော ရသေ့တောင်နယ်များ ဘင်္ဂကလီလက်အောက် မကျရောက်စေရန် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှု အသွင်ဖြင့် မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ကာ စည်းစနစ်ကျစွာ လုပ်ဆောင်ရမည်။ ခေါင်းဆောင်များအပိုင်း၊ ပညာရှင်များအပိုင်း၊ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအပိုင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများအပိုင်း၊ ပြည်သူများအပိုင်း စသည်ဖြင့် အဆင့်လိုက်တာဝန်ခွဲဝယ်ပြီး အပြန်အလှန် ဆက်စပ် လုပ်ဆောင် အကောင် အထည်ဖေါ်ကြရပေမည်။
ယခုကားယင်းသောမဟုတ် ပြည်သူများလည်း မစည်းလုံး သကဲ့သော အဖွဲ့ အစည်းခေါင်းဆောင်များသည်ပင်လျှင် တဦးနှင့်တဦး အဆက်အစပ်မရှိ၊ စကားပင်မပြော၊ စားပွဲဝိုင်းပင် အတူမထိုင်ဘဲ သူတလူ၊ ငါတမင်း ကစဉ်ကလျှားနှင့် ဦးတည်ချက်မဲ့၊ ရည်ရွယ်ချက်မဲ့စွာဖြင့် အဖွဲ့ ထောင်ပြီး မျောက်ပြဆန်တောင်း၊ ဂိုင်းဆန်ဆန် ခောတ်နောက်ပြန်ဆွဲ လုပ်ဆောင် နေကြခြင်းသည် ရခိုင်ကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂလီများပင် အထင်သေး၊ စော်ကားဝံ့သည့် သတ္တိ ကြီးထွားရာကနေ ရခိုင်များကို အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်၊ မီးရှိုး၊ မုဒိန်းကျင့် လာကြခြင်းဖြစ်သည်။
လေတလုံးမိုးတလုံးဖြင့် လွတ်လပ်ရေး၊ ဖက်ဒရယ်၊ ရခိုင်ပြည်ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရေး စသည်ဖြင့် ကြွေးကြော်နေကြသည့် လက်နက်ကိုင် ရခိုင်ပါတီ အဖွဲ့ အစည်းများ ကျည်တတောင့်ဖေါက်ကာ ရခိုင်ပြည်သူများကို အကာအကွယ် ပေးနှိုင်ဖို့ရာ မဆိုထားဘိ ဒုက္ခရောက်နေသော ရခိုင် တဦးကို ထမင်းတဆုပ် ရေတမှုတ်ပင် မကျွေး မွေးနိုင်ကြပေ။ ရှက်တတ်လျှင် အလွန်ရှက်စရာ ကောင်းပါသည်။
ရခိုင်အချင်းချင်း စိတ်လည်းမတူ၊ မူလည်းကွဲ၊ လူအများလည်း မစုစည်း ဦးတည်ရာမဲ့နေကြသည်။ ၀ါးဖေါင်ပျက်သကဲ့ သော ၀ဲဂယက်ကြားတွင် တောင်ထိုးမြောက်ထိုး အဟုန်ပြင်းစွာ ထိုးဆင်း ကွဲပြဲနေကြပါတော့သည်။
ပိုမိုဆိုးရွားသည်မှာ ရခိုင်များသည်းခြေပျက်၊ အကြောက်တရားကြီးစိုး၊ အချင်းချင်းသံသယပွား၊ ကိုယ့်လူမျိုးအပေါ် အထင်သေး အမြင်သေးရုံသာမက၊ တဖက်လူမျိုးမျာကို အထင်ကြီးအားကျကာ ဘင်္ဂလီများကို ပင်လျှင် အရှင်သခင် ကယ်တင်ရှင် သူရဲကောင်းကြီးများ မှတ်ထင်ပြီး ရခိုင် တော်လှန်ရေးပါတီ အဖွဲ့ အစည်းတချို့ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး စာချုပ်များချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်များ၏ ရုပ်ရောနာမ်နှစ်ဖြာ တစတစ ယုတ်လျှော့၊ အောက်ကျ၊ ပျက်ဆီး ယိုယွင်းလာကာ အမျိုးသား စည်းလုံးမှု လုံးဝ ပြိုကွဲနေခြင်းများကို အခြေခံကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အနောက်တံခါးကို ဘင်္ဂလီများက ရိုက်ချိုး ကျူးကျော် လာကြသည်ကို တရားလို ကိုယ်၌ရှာ ဆိုသကဲ့သော ရခိုင်များ မိမိကိုယ်ကို ဦးစွာပထမ ဆန်းစစ်ပြီး အဖြေ ရှာကြရပေလိမ္မည်။
သူတို့ အိမ်မက်လှလှု မက်နိုင်ပြီ
တဖက်ဘင်္ဂလီများကို ကြည့်ပါက စည်းလုံးခြင်း၊ စနစ်ကျခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်များ ထင်ရှားစွာရှိခြင်း၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာခြင်း၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်း၊ အမျိုးသားခံယူချက် ပြင်းပြစွာဖြင့် လှုပ်ရှားလာခြင်း၊ မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာများချမှတ်ကာ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောက်လာခြင်းများကိုတွေ့ ရပေသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်က အစ္စလမ်အဖွဲ့ ချုပ် (IOC)၊ ဦးဟန်ယောင်ဝေနှင့် ၄င်း၏ ဥရောပ-ဗမာဆိုင်ရာရုံးမှ ကြီးမှုး အထောက်အကူ ပြုလျှက် တာဂျာကိဆတင်နိုင်ငံတွင် အဖွဲ့ ပေါင်းစုံ၊ ခေါင်းဆောင်ပေါင်းစုံဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားသမဂ္ဂ (RNU) ကို ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ ၄င်းဘင်္ဂလီ များ၏ ခေါင်းဆောင်များမှာ အမေရိကားနိုင်ငံ ပန်ဆာဗေးနီးယား တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဝါကာအူဒင်၊ အင်္ဂလန်တွင် ဥပဒေဖြင့် မဟာဝိတ်ဇာဘွဲ့ ယူထားသူ နေရူးအစ္စလမ် နှင့် ဆရာဝန် ဒေါက်တာယူနိုးတို့ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့၏ အမျိုးသားမဟာဗျူဟာမှာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ရသေ့တောင်နယ်များကို သီးခြားခွဲထုတ်ပြီး အစ္စလမ် ရိုဟင်ဂျာ ပြည်နယ်ထူထောင်ရန်၊ ထိုမှတဆင့် ရခိုင်တပြည်လုံးကို သိမ်းယူကာ ရိုဟင်ဂျာ နိုင်ငံသစ်ထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်။
ချမ်းသာသော အာရပ်နိုငံများ၊ လူဦးရည်ထူထပ်သော မူဆလင် ဘင်္ဂလားနိုင်ငံ၏ အားပေးအားမြှောက်ပြုမှု၊ ပါကိစ္စတန်၊ အာဖကန် မူဂျာဟစ်နှင့် အေလ်ကိုင်ဒါကဲ့သော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ဆောင် အားပေးအားမြှောက်ပြုနေခြင်း၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများမှ လူ့အခွင့်အရေး ရှုတောင့်မှ အားပေးထောက်ခံမှုများ၊ မြန်မာအစိုးရ၏ ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂလီများကို သွေးခွဲအုပ်ချုပ်သည့် ပေါ်လစီနှင့် ရခိုင်၊ ဗမာ အကျင့်ပျက်လဒ်စားနေသော နယ်ခြားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ၀န်ထမ်းများ၊ ရိုဟင်ဂျာကို အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံ လုပ်စားနေကြသည့် ပြည်ပ ရခိုင်အင်ဂျီအိုများ၊ တော်လှန်ရေးပါတီ အဖွဲ့ အစည်း ခေါင်းဆောင်တချို့ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသစ်၊ နိုင်ငံသစ် ဤကမ္ဘာ မြေပြင်တွင် ဖန်တီး ဖြစ်ပေါ်လာရန် သူတို့ အိပ်မက်လှလှများ မက်နှိုင် ကြလေပြီ။
ဗျူဟာသစ်၊ နည်းသစ်၊ ပစ်မှတ် အသစ် များဖြင့်တိုက်ခိုက်လာခြင်း
၁၉၄၂ ခုမှ စတင်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်ကို အစ္စလမ်းနိုင်ငံ ထူထောင်ရေး အိမ်မက်သည် နှစ်ပေါင်း ၇၀ အတွင်း ပိုမိုနီစပ်လာသည်ဟု ဆိုရပေမည်။
၁၉၄၂ ခု တွင် ကာစိမ်း ဦးဆောင်သည့် မူဂျာဟစ်ဒင် အဖွဲ့ သည် ရခိုင် ၄၀၀၀၀ ကျော်ကို သတ်ဖြတ်ကာ ရွာများကို မီးရှိုးဖျက်ဆီးပြီး ရခိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်ရေး တွဲဖက်တာဝန်ခံ အိုင်စီအ(စ်) ဦးကျော်မင်းကိုပါ သတ်ဖြတ် ခဲ့သည်။ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောနယ်ကို မူဂျာဟစ် နယ်မြေများအဖြစ် ကျေညာခဲ့သည်။
ပါကိစ္စတန်နိုင်ငံသို့သွား၍ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးခေါင်းဆောင် မူဟာမတ် အလီ ဂျီးနာနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွဲပြီး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော နှင့် ရသေ့တောင်နယ်များကို ပါကိစ္စတန်လွတ်လပ်ရေး ကျေညာရာတွင် အရှေပါကိစ္စတန် ယခု ဘင်္ဂလားဒေ့(ခ်ျ) နယ်မြေအဖြစ်ပူတွဲ ကျေညာရန် တောင်းဆို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ရခိုင့်ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှုး သာကျော် ၂ နှစ်တိုင်တိုင် ထိုမူဂျာဟစ်များကို တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်းခဲ့ရသည်။ ရခိုင်ပြည်က မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။
၁၉၅၈ ခုတွင် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ ဖဆပလပါတီ မဲအနိုင်ရရှိရန် ရိုဟင်ဂျာ အမည်ကို တရားဝင် အသုံးပြုလာပြီး မှတ်ပုံတင်များ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
တဖက်တွင် ကာစိန်းနှင့် နောက်လိုက် နောက်ပါများသည် ဘင်္ဂလား၊ ပါကိစ္စတန်နှင့်၊ အာဖကန်နစ္စတန်နိုငံများတွင် မြေအောက်လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားမှုများကို လျှို့ ဝှက် တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ စစ်သင်တန်းများတက်ခဲ့ကြသည်။ ဆိုဒီအာရေဗေယား၊ မလေးရှားနှင့် အာရပ်နိုငံများကို ဖြန့်ကြဲခဲ့ကြသည်။
၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းတွင် ဒေါက်တာယူနိုး ဦးဆောင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ (RSO) ကိုဖွဲ့ စည်း ကာ စစ်အစိုးရနှင့် ရခိုင်ကို လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်ရန် ဘင်္ဂလား ရခိုင်နယ်စပ်တွင် လူစု၊ လက်နက်စု၊ စစ်သင် တန်းများပေးခဲ့ကြသည်။ လက်နက်ကိုင်အင်အား ထောင်ကျော် စုဆောင်းလှုပ်ရှား နိုင်ခဲ့ကြသည်။ တချိန်တည်းမှာ နေရူးအစ္စလမ်ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားအဖွဲ့ (ARNO) ကိုဖွဲ့ စည်းကာ ဘန်ဒရိုဘင်ဒေသနှင့် ကော့ဘဇားနယ်များတွင် လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၁ ခု (9/11) အမေရိကန် ဝေါထရိုက်စင်တာကို အေလ်ကိုင်တာများ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပြီး နောက်ပိုင်း အမေရိကန်အစိုးရမှ ဘင်္ဂလားအစိုးရကို ဖိအားပေးလာရာမှ ရခိုင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီ (NUPA) အပါအ၀င် ၄င်းရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့ များကို လူမြင်ရှင်ကြား လှုပ်ရှားမှုများ မပြုလုပ်ရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်။ လက်နက်များကို နယ်စပ်ဒေသများတွင် ၀ှက်ကာ လက်နက်ကိုင် အနည်းစုကိုသာ တပ်စိပ်များဖွဲ့ ပြီး ဘင်္ဂလားနယ်စပ်တွင် လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ များ (RNU) အောက်တွင် စုစည်းလာကြသည်၊ ဗျူဟာသစ်များကို ချမှတ်ကာ မြေပေါ်မြေအောက် ဆက်စပ် လှုပ်ရှားလာကြသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်ကိုလည်း တာဝန်ခွဲဝယ်ခြင်း စနစ်ဖြင့် ပီပြင်စွာ လုပ်ကိုင်လာကြသည်။ နောက်လိုက်အဖွဲ့ ဝင် ဘင်္ဂလီလူထုအနေဖြင့်လဲ အထက်မှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း တသွေမတိမ်း အသက်ပေး လိုက်နာလုပ်ဆောင်လာသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာအမျိုသားသမဂ္ဂ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ချမှတ်ခဲ့သော နည်းဗျူဟာမှာ ရခိုင်များကို ထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မငြိမ်သက်မှုများကို ဖန်တီပြီး ရိုဟင်ဂျာနှင့်ရခိုင် အတူတကွ နေထိုင် ရပ်တည်၍မရ၊ သီခြားပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ဒေသထားရှိရန်၊ ထိုကစ္စကို နိုင်ငံတကာ ၀င်ရောက် စွတ်ဖက်နှိုင်ရန်နှင့် အာရပ် ကမ္ဘာမှ ဖီ့အားပေးရန် ဖြစ်သည်။ ထိရောက်သည့် နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ဗျူဟာမြောက်လှုပ်ရှားမှုပင် ဖြစ်သည်။
ထိုဗျူဟာများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အကြောင်းတခုမှာ ၂၀၀၈ ခု မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ တွင် လိုအပ်သည့် အထူးအုပ်ချုပ်ရေး ဒေသများကို ဖွဲ့ စည်း တည်ဆောက်ကာ နယ်ပြည်တော်မှ တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်နိုင်ကြောင်း ပြဌာန်းထားသည်။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့်လည်း ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို ရေးဆွဲစဉ်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂလီများအရေးနှင့် ၀ လူမျိုးများ အရေးအပါအ၀င် တခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးငယ်များ၏ ပြည်နယ်များမှ ခွဲထုတ်ကာ သီးခြား အထူးအုပ်ချုပ်ဒေသများ ဖွဲ့ စည်းပြီး အစိုးရမှ ကိုင်တွယ်ရန် ဆန္ဒရှိခဲ့ဟန် တူပေသည်။
ထိုဦးတည်ချက်များ အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန် နည်းဗျူဟာသစ်အဖြစ် ပါလက်စတိုင်း၊ အစ္စရေး ပဌိပက္ခ လှုပ်ရှားမှု အသွင်ကို ပုံတူကူး လှုပ်ရှားလာခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မတ အိုဘားမား၏ တိုင်းပြည်နှစ်ခု (two state solution) ဖြေရှင်းနည်းကို မျှော်လင့် လာကြသည်။
အထူးသဖြင့် ပါလက်စတိုင်းအစွမ်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ဟာမာ(စ်)၏ နည်းများကို တိုက်ရိုက် သုံးလာကြသည်။ (၁) လူထုနှင့် ရခိုင်များကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်နည်း၊ (၂) လက်နက်ငယ်များ၊ လက်ပစ်ဗုံးများဖြင့် ရခိုင်နှင့် အာနာပိုင်များကို ချောင်တခင်ဝင်ပစ်နည်း၊ (၃) ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များကို လုပ်ကြံသည့်နည်း၊ (၄) ပွဲတော်များ နှင့် ရခိုင်အများစု စုဝေးရာနေရာများတွင် ဆူဆစ်ဗုံးများဖြင့် အစုလိုက် အပြုံလိုက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်နည်းနှင့် (၅) ပြောက်ကျားစစ်နှင့် ရခိုင်များ၊ အစိုးရ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်နှိုင်သူ၊ ရခိုင်ရွာများကို မီးရှိုးဖျက်ဆီး သူများနှင့် မိသားစုများကို ဆုငွေမြောက်များစွာ ပေးသည့်နည်း များသုံးလာကြသည်။
ယခုအချိန်တွင် လူထုနှင့် ဘင်္ဂလီကျေးရွာများတွင် စစ်သင်တန်းပေးထားသူတချို့သာလျှင် ရခိုင်များကို လူအုပ်ဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ရွာများကိုမီးရှို့ခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန်များတွင် အဆိပ်ခပ်ခြင်း၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခြင်းများကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။
တဖက်တွင်လည်း ရခိုင်ကို ရိုဟင်ဂျာများ လွန်ခဲ့သည့် ရာစုပေါင်းများစွာကတည်းကပင် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင်ဘုရင်များမှာ ရိုဟင်ဂျာများသာ ဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းလိမ်ဝါဒ ဖြန့်ချီခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရေးမှိုင်များ သွင်းကာ ရခိုင်ပြည်ကို အလာရှင်မြတ်၏ တောင်းဆိုချက်ကြောင့်သိမ်းပိုက် အုပ်ချုပ်ကာ အစ္စလမ်တိုင်းပြည် ပြုလုပ် တည်ထောက်ခြင်းဖြင့် အလာရှင်မြတ်၏ ကောင်းချီးပေးခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပလီများတွင် သာသာရေး ခေါင်းဆောင် မိုလဘီများက အမြဲဟောပြော စည်းရုံးသိမ်းသွင်းလျှက်ရှိပေသည်။
တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂလီများသည် တစစ၊ အရွေ့ ရွေ့ နှင့် ရေငွေ့များစုစည်းကာ မိုးသားမိုးတိမ် အစဉ်အခဲများ ဖြစ်ထွန်းလာသကဲ့သော ခိုင်မာလာကြသည်။ အမျိုးသားရေးနိုးကြားလာကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားကာ ယုံကြည်မှုပြည့်ဝ လာကြသည်။
ပထမ အနောက်တံခါးကို ချိုးဖျက်ခံခဲ့ရခြင်း
သာဂီနွယ်မျိုးရခိုင်တို့သည် အရှေ့မှာ မာလကာ၊ ပဲခူး၊ အနောက်မှာ ဘဂါင်္ ၁၂ မြို့၊ မဂို၊ တရိပူရ ကိုပင်လျှင် ကြီးစိုး အုပ်ချုပ် သြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့ကြပေသည်။ ပိုတူဂီ၊ ချက်(ခ်ျ)၊ ဂျပန် ပြင်သစ်များကိုပင်လျှင် စစ်ရေးစစ်ရာ အမှုတော်ထမ်း အဖြစ် အမျိုးသားကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အခိုင်းအစေပြုခန့်အပ်ခဲ့ကြသည်။ ကောင်းကင်မှာ သိန်းငှက်၊ ရေပြင်မှာ ရခိုင် အနောက်ဘင်္ဂလား ပင်လယ်တကြောတွင် ပြိုင်စံရှား ကြီးစိုး မင်းမူခဲ့ကြပေသည်။
၁၄၅၉ ခုတွင် ရခိုင်ဘုရင် ဘစောဖြူသည် စစ်တကောင်းနှင့် ဘင်္ဂါ (ဒကား) မြို့များကို သိမ်းပိုက် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဒေလီရှိ မဂိုဘုရင်များကို အကြိမ်ကြိမ် စစ်ချီ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ မဂိုဘုရင်များ၏ နှစ်စဉ် အခွန်ဆက်ရန် ကမ်းလှမ်းချက်ဖြင့် စစ်ပြေငြိမ်းရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀၇ နှစ် ဘင်္ဂလားကို အုပ်ချုပ်နေစဉ် စန္ဒရ သီရီသုဓမ္မ ရာဇာမင်း လက်ထက်တွင် (၁၆၅၂-၁၆၇၄) မဂို စစ်ရှုံး အိမ်ရှေ့မင်းသား ချာရှုးဂျာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှာင်လာသည်ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ဒေလီမင်းများ၏ စစ်ထိုြး ခင်းကြောင့် ထွက်ပြေး တိန်းရှောင်လာသည့် ထရိပူရ စစ်ပြေးဘုရင် ဂိုးဗိန္ဒ မူနီကာမင်း စစ်တကောင်းနယ်သို့ တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးလာခြင်းကို ရခိုင်ဘုရင်မှ လက်ခံ အကာအကွယ် ပေးခဲ့သည်။
နောင်တွင် ချာရှုးဂျာ သူပုန်ထပြီး မြောက်ဦးနန်းမြို့တော်ကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးစာခြင်းကြောင့် ကွပ်မျက်ခဲ့ရာမှ ဒေလီမင်းနှင့် နှစ် ၃၀ ကျော်စစ်မက် ဖြစ်ပွားကာ ဒကား နှင့် စစ်တကောင်း ဒေသကို ၁၆၆၆ ခုနှစ်တွင် လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ရခိုင်လူမျိုးများ၏ ပထမ အနောက်တံခါးကို ချိုးဖျက်ခံခဲ့ရသည်။
နတ်မြစ် အရှေ့ ဖက် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောကို ခံစစ်ခင်းကာ ရခိုင်ပြည်ကို မဂိုကုလားများ လက်တွင်းသို့ မကျရောက်စေရန် သိတ္တိပြောင်မြောက် မျိုးစောင့်တရားကြီးမားပြီး ဇာတိသွေးဇာတိမာန်အပြည့်ဖြင့် စည်းလုံးညီညာစွာ တွန်းလှန် တားဆီးနိုင်ခဲ့ကြသည်။
ရာစုပေါင်း ၅၀ ကျော် ရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကို ကြက်ပျံမကျ စည်းကားသစ်မြစ်စွာ တည်ထောင် အုပ်ချုပ်နေစဉ်၊ မဟာသမ္မတရာဇာမင်း လက် ထက် စည်းမျဉ်းခံ ဒီမိုအကေစီ ဘုရင်စနစ်ဖြင့်ကျင့်သုံးနေစဉ်၊ နန်းတွင်း အာနာ ဖက်ပြိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ကာ သစ္စာဖေါက် ငသံဒေသည် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်လို၍ ဗမာဘုရင် ဘိုးတော် မောက်ဝိုင်းကို ရခိုင်ကို စစ်ချီသိမ်းပိုက်ကာ သူ့အား ဗမာသစ္စာခံအဖြစ် နန်းတင် မင်းမြှောက်ပေးရန် ချဉ်းကပ်တောင်းဆိုရာမှ မြောက်ဦးရွှေနန်းတော်ကို ၁၇၈၄ ခု ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ သန်းခေါင်ကျော် ၁ နာ ရီတိတိတွင် ဗမာများ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစပြီး ရခိုင်တို့၏ အချုပ်အချာအာနာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အရှေ့ တံခါး ချိုးဖျက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ဗမာများနှစ်ပေါင်း ၄၂ နှစ် အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလအတွင်း ရခိုင် ၃၀၀၀၀၀ ကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ပြီး စစ်သုံးပန်း ၅၀၀၀၀
ကျော်ကို ဖမ်းဆီးကါ မိတ္တီးလာကန်ကို တူးစေ ခဲ့သည်။ သေဆုံးသည့် စစ်သုံးပန်းအရိုးများဖြင့် ကန်ဘေင်ရိုးကို
တည်ဆောက်စေခဲ့သည်။ မြောက်ဦးရွှေနန်းတော်၏ ခေါင်မိုးကြေးပြားများကို ခွာဟူကာ မြသိန်းတန်နှင့်
မင်းကွမ်းခေါင်းလောင်း သွန်းလုပ်စေခဲ့သည်။ မဟာမြတ်မုနိုဘုရားကြီးကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ကာ ရခိုင်စစ်သုံးပန်းများဖြင့်
မန္တလေးသို့ ကုန်းတတန် ရေတတန် ထမ်းပိုးသယ်ယူစေခဲ့သည်။ ပိဍကပ်သုံးဖုံ အပါအ၀င် ရခိုင့်အမွေအနှစ် ကျမ်းကန်
ပရဗစ်များကို အမရပူရသို့ သိမ်းဆည်းယူဆောင်ခဲ့ကြသည်။
၁၇၉၉ ခုတွင် ရခိုင်ဒုက္ခသည် ၅၀၀၀၀ ကျော် ပန်းဝါ၊ ရာမူး၊ ကော့ဘစားနှင့် စစ်တကောင်းဒေသများသို ထွက်ပြေး တိမ်းရှေင်ခဲ့ရသည်။ ၁၇၉၈ တွင်ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းသည် ရခိုင် ၄၀၀၀၀ ကို စစ်မှုထမ်းရန် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ သေနပ် ၂ သောင်းဝယ်ယူရန် ရွှေ ငွေများကို အတင်း အဓမ္မ သိမ်းယူခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ရခိုင် တပြည်လုံး၌ လူဦးရည် သိန်းဂဏန်းမျှသာ ကျန်ရှိခဲ့ပေသည်။
အောက်ကျ သူ့ကျွန် ရခိုင်မခံ
ရခိုင်တို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း၊ ဇာတိသွေးဇာတိမာန် ပြင်းပြခြင်းကြောင့် ဗမာနယ်ရှေ့များကို ၁၇၈၄ ကပင် ဗိုလ်ကျော်ထွီး၊ ဗိုလ်ချင်းပျံတို့ တော်လှန်ခဲ့ကြသည်။ မြောက်ဦးမြို့ကို ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဗမာများက တဖန်ပြန်လည် သိမ်းယူခဲ့သည့် အပြန်အလှန် တိုက်ပွဲများ ၄၂ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြသည်။ တဖန် ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် ဒေ၀န်းကြီးအောင်ကျော်ရွှီ၊ မြို့သူကြီးအောင်ကျော်ဇံ၊ မင်းသားကြီးရွှိဘ မ်းတို့ သူ့ကျွန်မခံ စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ရခိုင်များကို ဦးဆောင်ပြီး အင်္ဂလိပ်နှင့်ပူးပေါင်းကာ ဗမာနယ်ချဲ့ တို့ကို ရခိုင်မြေပေါ်မှ ၁၈၂၆ ခုတွင် အပြီးအပိုင် မောင်းထုတ်နှိုင်ခဲ့သည်။ သိန်းဂဏန်းမျှသာကျန်တော့သည့် ရခိုင်မျိုးဆက် မျိုးနွယ်များကို လူဦးရည်တိုပွား စေရန် စွမ်ဆောင်နှိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရခိုင့် အစဉ်အလာ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို ပြန်လည်တည်ဆောက် ခဲ့ကြသည်။ ရခိုင့်စာပေ၊ စကားနှင့် ဗုဓ္ဒဘာသာကို ပြန်လည်ထွန်းကားစေရန် လုံးလ၀ိရိယဖြင့် တည်ဆောက် ပြန့်ပွားခဲ့ကြသည်။ ဂျပန်များကို ရခိုင်မြေမှမောင်းထုတ်ရန် အစဉ်တစိုက် တော်လှန်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၃ ခု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သည့် ဖဆပလ အဖွဲ ဂျပန်ကိုမတော်လှန်မှီ အချိန်ကတည်းက ရခိုင်ပြည်တွင် အေအင်စီ ဦးဆောင်ပြီး ဂျပန်များကို ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် အပြီးပြတ် တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းနှိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ အပါအ၀င်၊ ဗုဓ္ဒဘာသာကလျာနယုဝအသင်း ဥက္ကဌ ဒေါက်တာရွှေဇံအောင်၊ ဦးညိုထွန်း၊ သခင်ဘစိန်တို့ အင်္ဂလိပ်နယ်ရှေ့ဆန့် ကျင်ရေး ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ကျားကြောက်၍ ရှင်ကြီးကိုး၊ ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး
သို့ရာတွင် ကျေးဇူးကမ်း၊ ဖေါက်ပြန်တပ်သည့် အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား ဗမာများသည် ၁၉၄၈ ခု ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရလာသည်နှင့်တပြိုင်နက် ရခိုင်များကို သစ္စဖေါက်ကာ ဘင်္ဂလီများနှင့် ရန်တိုက် ပေးလာကြသည်။ ဦးနု၊ နေ၀င်း၊ စောမောင်၊ သန်းရွှေ ဗမာ အုပ်ချုပ်သူ အဆက်ဆက်သည် ရခိုင်များကို ချိုးနှိမ်ကာ ဘင်္ဂလီများကို သွေးထိုး မြှောက်ပင့် ပေးကြသည်။
ဦးနု လက်ထက်တွင် ရိုဟင်ဂျာ အသံလွှင့်ရေဒီယို လိုင်းများ လုပ်ပေးခဲ့သည်။ ရခိုင်ပါတီများနှင့် မဲမယှဉ်နှိုင်သည့်အခါ ဘင်္ဂလီများကို နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ထုတ်ပေးပြီး မဲဆွေစည်းရုံးခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလီလူမျိုး မစ္စတာစူလတန်ကို ကျမ္မာရေးဝန်ကြီးခန့် အပ်ခဲ့သည်။ ဦးနေ၀င်း တော်လှန်ရေးကောင်စီ တက်စဉ်ကလည်း ၁၉၇၄ ခု ဟင်းသာ စီမာန်ကိန်းတွင် မှတ်ပုံတင်စီးစစ်ရာမှ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိန်းရှောင်ခဲ့သည့် ဘင်္ဂလီ ၇၆၈၂၃ ဦး အပြင် ၃၂၈၄၄ ဦး ထပ်မံတိုးရှေ့ကာ စုစုပေါင်း ဘင်္ဂလီ ၁၀၉၆၆၇ ဦး လက်ခံခဲ့သည်။ မှတ်ပုံတင် စီးစစ်ခြင်းမရှိ၊ ရခိုင် ဗမာစကားလုံးဝ မပြောတတ် သူများနှင့် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ နာမည်များကိုပင် မဖြေတတ် သူများကိုပါ လက်ခံခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်များ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
စောမောင်၊ သန်းရွှေလက်ထက် စစ်အုပ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ် ၂၂ နှစ်တာ ကာလအတွင်း အဆိုးဆုံဖြစ်သည်။ လဒ်စားသောစစ်အရာရှိများ၊ လ၀ကနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲများက ကုန်းလမ်းဖြင့်တတံ၊ ရေလမ်းဖြင့်တမျိုး ခိုးဝင်လာသည့် ဘင်္ဂလီ ၅၀၀၀၀၀ ကျော်ကို လက်ခံကာ မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေး ခဲ့ကြသည်။ မြေယာ၊ လုပ်ငန်း လိုင်စင်များ အလွယ်တကူထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့် အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်အတွင်း ဘင်္ဂလီဦးရည် ၂ ဆတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ရခိုင့်လယ်ယာမြေများကို ဘင်္ဂလားနိုင်ငံသားများကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်စေခဲ့သည်။ ရခိုင်များ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းစေရန် လယ်ယာမြေများကို သိမ်းယူခဲ့ကြသည်။ ဆည်မြောင်းချောင်းကန်များကို ပိတ်ဆို့ကာ အကောက် အခွန်များ ကောက်ယူ လေလန်ဆွဲခဲ့ကြသည်။
ပြည်နယ်တွင်း ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်သည့် လုပ်ငန်းများကို ပိတ်ပင်တားဆီး၊ အကောက်ဂိတ်များချကာ အကောက်ခွန်များ မတန်တဆ ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်ပြည်သူများကို ဖိနှိပ် ချိုးနှိမ် မောက်မာစွာဆက်ဆန်ပြီး နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုကျင့်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က အချမ်းသာဆုံးပြည်နယ်အဖြစ်မှ အဆင်းရဲးဆုံးပြည်နယ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိ ခဲ့ရသည်။ သိန်းနှင့်ချီသော ရခိုင်လူငယ်များ မိမိရပ်ရွာကို စွန့် ခွာပြီး အလုပ်အကိုင်ရရှိနှိုင်သည့် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အခြားပြည်နယ်၊ တိုင်းများ အပါအ၀င် ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒယ၊ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက် အလုပ်ရှာဖွေ ခဲ့ရသည်။ ရခိုင်ရွာများတွင် သက်ကြီးရွယ်အို၊ ခလေးနှင့် အမျိုးသမီး များသာ ကျန်ရှိကြတော့သည်။
ထိုအားနည်းချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ဘင်္ဂလီများသည် အဆမတန် လဒ်ထိုးပြီး ရခိုင်မြေ၊ လယ်ယာများကို အဖိုးကြီးပေး ၀ယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်လာကြသည်။ စစ်အရာရှိများနှင့် အကျင့်ပျက် လဒ်စားသော လ၀က မြေတိုင်း အရာရှိများ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝလာခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်များအဖို့ရာမှာ မြေလဲဆုံး၊ လူမျိုးလည်း ၀ါးမျိုခြင်းခံ လိုက်ရပေတော့သည်။
ပါတီနိုင်ငံရေးနှင့် ဘင်္ဂလီ ပြသနာ
၂၀၁၀ခုနှစ် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမတိုင်မှီ ကြံဖွန့်ပါတီအတွက် မဲဆွေစည်းရုံးရာတွင် ဘင်္ဂလိ ၄၀၀၀၀၀ ကိုနိုင်ငံသားကဒ် ထုတ်ပေးကာ ကျန် ၄၀၀၀၀၀ ကို အဖြူရောင်ယာယီနိုင်ငံသားကဒ်များ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို မဲပေးရန် မဲဆွေခဲ့ကြသည်။ ဘင်္ဂလီများကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတိ အမတ်များ တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။
ယခုအခါ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတိသာမက ဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ် (NLD) သည်လည်း ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ဘင်္ဂလီများကို မက်လုံးအမျိုးမျိုးပေးပြီး မဲဆွေ စည်းရုံးလာမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပေ။ နောက်ဆုံးတွင် ရခိုင်များသည် မြေဇာ ဖြစ်ကြရပေတော့မည်။
နဖူး လက်တင် ဆင်ခြင်ကြကုန်လော
အရိုင်းတမာ ဘင်္ဂလီ ကုလားများမှာ ရခိုင့်မြေမှ ထွက်သည့် ဆန်ရည်စပါးများကိုစားပြီး ရခိုင့်ပျိုဖြူများကို မုဒိန်းကျင့် လေပြီ၊ ရခိုင့်ရေကိုသောက်ပြီး ရခိုင်များကို သွေးချောင်းစီစေခဲ့သည်။ ရခိုင့် မြေမှာနေပြီးရခိုင့် အသက်များကို သတ်ဖြတ် သုတ်သင် ကြလေပြီး။ မိုက်ရိုင်းစော်ကား ကြလေခြင်း။
သမိုင်းတွင် ဤမျှခံပြင်း နားကျဉ်း သွေးဆူဆရာ မရှိတော့ပေ။ မသီတာထွေးကို လူမဆန်စွာ မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ကူတောင်ရွာတွင် ရခိုင် ၁၀ ဦးကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုယ်မြေ၊ ကိုယ့်အိမ်မှာ နေပြီး ၅၀၀၀၀ ကျော်သော အိုးမဲအိမ်မဲ့ ရခိုင်ဒုက္ခသည် ဖြစ်နေရခြင်းသည် ရခိုင်များ အဖို့ ကမ္ဘာတွင် အရှက်ရ သိက္ခာကျဆင်း စေခဲ့သည်။ ထောင်ပါင်းများစွာသော ရခိုင့် အိုးအိမ်များကို မီးတိုက် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာမှာနေပြီး ကျီးလန့်စာစား အကြေက်တရားဖြင့် နေကြရသည့် ဘ၀သည် ရခိုင်များ၏ လူ့သိက္ခာ အဖတ်ဆ ယ် မရတော့သည့် အခြေအနေဆိုးကို ကျရောက်စေခဲ့သည်။
ဤသော ရခိုင်များ စော်ကား ခံနေရခြင်းသည် ရခိုင့် အစဉ်အလာမဟုတ်။ သံသရာ ကြွေးလည်း မဟုတ်။ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂလီကုလားမျး၏ ကျုးကျော် တိုက်ခိုက်ကာ ရခိုင်များကို ရခိုင်ပြည်မှ မောင်းထုတ်လို၍ ဖြစ်သည်။
ရခိုင်သူ ရခိုင်သားများသည် ဤအဖြစ်သနစ် အမှန်စင်စစ်ကို မရှု၊ မတွေး၊ ဂရုမစိုက်၊ ကိုယ်နှင့်မဆိုင် ဘက်မကိုင်ဘဲ ဖာသိဖာသာ ဆက်လက် အိမ်မောကျနေကြလျှင် ရခိုင်သားပျော် သမီးပျော်များ မသီတာထွေး ကဲ့သော အဖြစ်ဆိုးနှင့်ကြုံလာကြရမည်။ ကူတောင်ရွာသားများ ကဲ့သော ရက်စက်စွာ သုတ်သင်ခြင်းကို ခံကြရမည်။ ရခိုင့်ရွာများ နောက်ထပ်တဖန် မီးလောင်တိုက်သွင်း ပြာချခံလာကြရမည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ စာသင်ခန်းများသည်လည်း ရခိုင်များ ပုန်းအောင်းစရာ ဒုက္ခသည် စခန်းများ ဖြစ်လာကြမည်။ နောင်ဆုံးတွင် ယနေ့ငါပင်လျှင် မကြာခင် ကုလားကျွန် ဖြစ်ရပါတော့မည့် ကိန်းပါတလားလို့နဖူးကို လက်တင် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ကြကုန်လော။
ထာလောရခိုင် ရခိုင်ထလာ။ သင်တို့တွင် ကြီးကျယ် ခန်းနား သမိုင်းများရှိ၏။ သောက်စားမကုန် စားနက်ရိက္ခာ အလျှံပါယ်ရှိ၏။ ဇေတိပုထိုး ဘုရားကျောင်းကန် ဗုဓ္ဒကျမ်းကန် ပြည်ရွာအနှံ ပျံလည်းပျံ၏။ ယဉ်ကျေးမှုအရာ စာပေ သုတ ပေါကြွယ်ဝ၏။
ထလောရခိုင်၊ ရခိုင်ထလော။ ပင်လယ် တောင်တန်း၊ ချောင်မြောင်းအင်းအိုင်၊ မြစ်နဒီလည်း သဘာဝပေး တည်ထားမြဲ၏။ တေင်ယာ လယ်ကွင်း၊ စိမ်းမြ မြက်ခင်း၊ သာမော ရှု့ပျော် ပြည်တခေါ်သည် ဘုံမိနက်သန် နိဗ္ဗာန်အလား ရက္ခိုင်ပြည်ကား တို့ဘိုး တို့ဘွား အဇူအဇာ ရာစုများစွာ ကာကွယ်လာ၏။
ထလောရခိုင် ရခိုင်ထလော။ စုပေါင်းညီညာ ပြည်သာယာဖို့၊ စည်းလုံးခြင်းအား သင်ကားစွမ်း၏၊ ငါလည်းတမူ ထွန်းတောက်ပြာင်၏။ ကောင်းခင်ကြည်းပြာ စီရီသည့်အလား ထူးခြာတမူ၊ ကျွန်းတွင် ဇဗ္ဗူ၊ လူတွင်ရခိုင် ကြိုင်သိ သတင်း ညီညွတ်ခြင်းသာ အခရာတည်း။
ထလောရခိုင် ရခိုင်ထလော။ အမျိုးသားအားမာန်၊ တဖန်ပြန်သစ်၊ ရဲရင့် တည်ကြည်၊ မြဲစေသိလ၊ မျိုးမြတ်သာဂီ စောင့်ထိန်းလေမှ ဤလောက၌ ရခိုင်နာမ ထွန်းတောက်လိမ္မည့်။
ထလောရခိုင်၊ ရခိုင်ထလော။ မျက်ရည်ကိုသုတ် ဓါးကိုနှုတ်၍၊ ကျူးကျောင်သူရန်၊ တွန်းလှန်ကြလော။ ကိုယ့်တိုင်း ကိုယ့်မြေ၊ တလက်မဖဲ့ မခံလေနှင့်။ ကိုယ့်မျိူး ကိုယ့်ဆွေ ရခိုင်မှန်ကေ တောင်သား မြောက်သား ဘယ်မှာ ခြားနား၊ စွန့်မထားနှင့်။ လဲသူကိုထူ၊ နာသူဖဲမ ကူဖို့ လောင်းကြ၊ သေလည်းအတူ ရှင်အတူမို့ စွန်လွှတ် အစ်နာ ခံကြလော။
ထလောရခိုင်၊ ရခိုင်ထလော။ ယောင်္ကျား သေရာ စစ်တလင်းမှာ။ ကိုယ့်တိုင်းကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်မျိုးနွယ်အတွက် အသက်ပေးလို့ ဆောင်ရွက်ကြစေ။ ရွှေပြည် ရက္ခိုင် မယိုင်းမလဲ ရိုးတောင်စဉ်ကဲ့ တည်ကြည် ခိုင်ခန့် တံတိုင်းကြီး သဘွယ် သင်ကာကွယ်လော။
ထလောရခိုင်၊ ရခိုင်ထလော။ ပြည်သာယာမှ သင်ဝမ်းဝမည်။ ပြည်ညီညာမှ သင့်ဘ၀လှမည်။ ပြည်ကြီးပွားမှ သင်ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ လူတောတိုးမည်။ ပြည်ခိုင်မာမှ သင်လည်း တမူ အစွမ်ထက်လာမည်၊ ဤသည် ဌိတ္ဘ မုတ်ယူကြလေ၊ သာဂီနွယ်မျိုး ရက္ခတိတရို့ နိုးထကြလော၊ ထကြလော။
အနောက်မှာရန် အရှေ့မှာ ဓါးလှန်၊ ရင်ကို စွတ်ထိုး သေဘေးမျိုးကို မျက်ရည်ခံထိုး ရှေ.ခိုး ခြေကိုင် မကြံလေနှင့်။ ရရာလက်နက် အသင့်စွဲကိုင် ပြန်တွန်းလှန်ကြ။ ရှေသွား နောက်ပါ စုရုံးကာပင်၊ ပိတောက်စည်တီး၊ ဗျိုးသံပေး၍၊ အဖြူတ၀က် နီတ၀က်နှင့် အမျိုးသားအောင်လံ မိုးထက်ယံ၌ လွှင်ထူတလူလူ။ ရဲစိတ်ရဲမာန်၊ ရဲတံခွန်နှင့် ချီးလေ တပ်ရဲ တပ်ထောက်တွဲ၍၊ အောင်ပွဲပန်းတိုင် ချီကြလော။ အေ်….ရခိုင်သားရို့၊ နိုးထကြလော၊ ထကြလော။
Last Updated ( Tuesday, 10 July 2012 19:29 )
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 05:53
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အနောက်တံခါးကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခြင်း ခံနေရသော်လည်း အိပ်မောကျနေကြသည့် ရခိုင်များ . All Rights Reserved